Sida loo noqdo mid ka mid ah kuwa iibka ugu sarreeya ee Amazon?
Waxaa laga yaabaa inaysan jirin dood ku saabsan sida loo noqdo mid ka mid ah iibiyeyaasha ugu sareeya ee iibka on Amazon ayaa macno samaynaya iyada oo aan qaybta ugu muhiimsan ee guulaha ganacsiga ee loo yaqaan 'automation'. Hoos waxaan ku socdaa si dhakhso ah u socodka sadex siyaabood oo awood ah oo otomaatik ah oo Amazon ah - oo leh cilmi-baaris muhiim u ah badeecada iyo badeecada alaabta loo baahan yahay si aad u aragto adigu ku qoran liiska ugu sareeya iibiyeyaasha ee Amazon. Su'aalaha ku saabsan ereyada saxda ah iyo sida loo helo waxay u badan tahay tan ugu badan ee loo tixraacsan yahay iibsadaha soo iibsiga ee Amazon, gaar ahaan kuwa leh dhowaan laga soo rogay SEO-da asalka ah ee raadinta Google - chapter 13 lawyer pennsylvania. Adiga oo tixgelinaya inaysan jirin qalab cilmi-baaris oo muhiim ah oo ku saabsan Amazon, jawaabta gaaban waa inaad adigu gacantaada ku sameeyn kartid qodobada soo socda:
Isticmaal Qorshe-gaaban Google ee Qorshaha si loo aqoonsado erayga muhiimka ah ee aasaasiga ah.
Ku dheji qodobkan muhiimka ah ee qaybta raadinta alaabta ee Amazon.
Eeg talooyinka raadinta si aad ugu sharaxdo sawirka weyn ee xaaladdaada shakhsi ahaaneed.
Sida aad hore u qiyaastay, adoo samaynaya shaqada gacanta ayaa noqon doonta mid aad u weyn, xitaa hal erey oo muhiim ah ama weedh dheer oo loo adeegsado iibiyeyaasha ugu sareeya ee Amazon. Marka, maxaa la qaban karaa? Adiga oo tixgelinaya automation, waxaan kugula talin karaa inaad isticmaasho mid ka mid ah qalabka cilmi baarista ee soo socda si aad u noqotid iibiye guuleysta halkaas:
KTD Amazon Keyword Key Tool - waa qalab bilaash ah waxay kaa caawin kartaa xitaa haddii aad dooneysid raadinta raadinta dheer ee muhiimka ah. Waxay si fudud u shaqeysaa adigoo si toos ah u siinaayo weydiimaha kuxiran barta shabakada Amazon ee ku taal dhammaan niche iyo waxyaabaha muhiimka ah ee la xiriira waxyaalaha aad raadineyso.
Furayaasha furaha - waa bedelaad kale oo dheeraad ah oo kaa caawinaya raadinta cilmi-baarista ee Amazon. Waxyaabahani waa in qalabkan oo dhan isku duubo xogta oo dhan ma aha oo keliya Amazon laftiisa, laakiin wuxuu adeegsanayaa nidaam kaas oo sidoo kale ka jiidaya xogaha mashiinnada raadinta waaweyn (sida Google laftiisa, iyo sidoo kale Yahoo iyo Bing). Sidan, Ereyada Merchant waxay isticmaalaan algorithm si ay isugu geeyaan su'aalaha raadinta ee isbarbardhigga Amazon waxayna ku siiyaan qiyaasaha ugu badan ee gaadiidka.
Waxaan aaminsanahay in dhammaan kuwa ku guuleystey in ay ku guuleystaan ​​Box Buy ee Amazon ugu yaraan laba jeer mar hore bilaabay tartiib u galay dhibaatadan. Waxaan ula jeedaa in qof kasta oo tartamaya uu mar walba isticmaali karo xeelado isku mid ah si uu u dhaafo liiskaaga oo aad ku aragto kuwa iibka ugu sarreeya ee Amazon Buy Box - oo kaliya hoos u dhigaya qadar yar si aad u hesho kaalintaada ka horeeya. Oo halkan waa marka qalabka wax lagu mamnuuco alaabtu ay ciyaaraan. Anigu shakhsiyan waxaan ku talineynaa in ay isku dayaan in ay isku dayaan "Repricer Express. Qalabkani wuxuu leeyahay interface aad u sahlan, isagoo ka mid ah kuwa ugu jawaab celinta badan iyo kuwa waawayn ee laga helo suuqa oo hadda jira. Sidee u shaqeysaa? Si fudud u dhig, qalabkan waa MUST-haysan haddii aad haysato liisamo badan oo badeeco ah ama alaab aad u badan oo lagu soo bandhigay iibka Amazon. Xaqiiqdii, ma jirto qaab kale oo looga hadli karo tartanka dhabta ah ee Amazon ka baxsan iyada oo aan si fiican u shaqaynin software-celinta. Wixii dheeraad ah - xalkan had iyo jeer wuxuu ka mid ahaa talooyinka ugu fiican, badanaa sababtoo ah waxay leedahay sicir bille ah oo bilaash ah, iyada oo aan wax kharash ah oo ku salaysan komishanka.